inkcubeko inkampani - GUANGDONG PENGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD
Inkcubeko yenkampani inokuchazwa njengomphefumlo wenkampani enye onokubonisa injongo kunye nomoya wenkampani. Njengoko isilogeni sethu sithi 'Pengwei Persons , Pengwei Souls'. Inkampani yethu igxininisa kwingxelo yobuthunywa kukugcina izinto ezintsha, ukugqibelela. Amalungu ethu alwela inkqubela kunye nokugcina ukukhula kunye nenkampani.
Amaxesha amaninzi akukho nto ibonisa inkcubeko enentlonipho emsebenzini kunendlela abantu abaphathwa ngayo nabalingane abancinci, abancinci. Kwinkampani yethu, sithatha imbeko kuye wonke umntu okwinkampani yethu nokuba uvela phi, loluphi ulwimi lwakho lweenkobe, sithini isini sakho, njl.
Sisebenza njengoogxa bethu njengabahlobo. Xa sisemsebenzini, siyasebenzisana, sincede ukoyisa iingxaki kunye. Xa singasebenzi, singena kwibala lokudlala senze imidlalo kunye. Ngamanye amaxesha, sithatha ipikiniki eluphahleni. Xa amalungu amatsha engena kwinkampani, sibamba itheko elamkelekileyo kwaye sinethemba lokuba baziva besekhaya.
Sicinga ukuba kubalulekile ukuba neengqondo ezivulekileyo. Wonke umntu kwinkampani unelungelo lokunika iingcebiso zakhe. Ukuba sineengcebiso okanye impendulo malunga nomcimbi wenkampani, sinokwabelana ngezimvo zethu nomphathi wethu. Ngale nkcubeko, sinokuzisa ukuzithemba kuthi nakwinkampani.
Ukukhuthaza ngamandla okunika abasebenzi ithemba. Inkokeli iya kunika inkuthazo xa sasiqala imveliso yonke imihla. Ukuba senza iimpazamo, siya kugxekwa, kodwa sicinga ukuba oku kukwalukhuthazo. Sakuba senze impazamo, sifanele siyilungise. Ngenxa yokuba indawo yethu idinga ukujongwa, ukuba asikhathali, siya kuzisa imeko embi kakhulu kwinkampani.
Sikhuthaza abantu ukuba benze izinto ezintsha kwaye banike iingcinga zabo, bajongane. Ukuba baqhuba kakuhle, siya kunika imbasa kwaye sinethemba lokuba abanye abantu benza inkqubela.